Flightsgbọ elu ọhụrụ si Tel Aviv gaa Morocco, Bahrain, Saudi Arabia, UAE - ma na-eto
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Flightsgbọ elu ọhụrụ si Tel Aviv gaa Morocco, Bahrain, Saudi Arabia, UAE - ma na-eto
Airlines • Airport • Akụkọ Bahrain na -agbasa • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Na -agbasa n'Ijipt • Akụkọ Ọchịchị • Israel Na -agbasa Akụkọ • Akụkọ na -agbasa na Jordan • Akụkọ na -agbasa na Morocco • Akụkọ na -agbasa na Saudi Arabia • trending Ugbu a • Akụkọ na -agbasa UAE • Akụkọ dị iche iche
Na-ejikọ Tel Aviv na ọdụ ụgbọelu na UAE, Morocco, Saudi Arabia, na Bahrain ga-agbasa njem na njem nleta na Middle East.
Forwa maka ụmụ Israel ghọrọ ndị toro eto karị na onye isi ala US Trump na-akparịta ụka udo na ọnụ ọgụgụ na-aba ụba nke mba ndị dị na Middle East na Gulf Region.
America nke mbu bu okwu ndi isi ala US President Trump na agha ahia ebe obu na aturu anya na mba ndi a ka a ga-ekwe ka ha nweta ngwa agha site na US Nke a dị mma maka akụ na ụba US na-arịa ọrịa kamakwa ọ dị egwu ma ọ bụrụ na emejuputa ya ngwa ngwa na nzube iji merie ntuli aka US.
Na mbụ, na-esochi ọkwa nke Onye isi ala US Donald Trump nke udo udo n'etiti Israel na United Arab Emirates, onye ndụmọdụ White House bụ ndụmọdụ Jared Kushner gosipụtara na mba Arab abụọ ekwenyela imeghe mbara igwe ha iji gaa njem site na Israel, gụnyere Bahrain, nke a ga-esonye na mbinye aka nke nkwekọrịta UAE-Israel.
Morocco na Israel ga-eguzobe ụgbọ elu ụgbọ elu dị ka nke iji dozie mmekọrịta Arab na Israel, Jerusalem Post kọrọ na satọde.
Nkwupụta a bịara dịka akụkụ nke mbọ ị na-ahụ maka Arab na Israel nke ndị Trump kpalitere ka ha rutere nkwekọrịta UAE-Israel. A ga-etinye aka na nkwekọrịta na White House ozugbo Tuesday na-esote.
Na 15 August, Times nke Israel kọrọ, na-ezo aka ndị ọrụ US na-amaghị aha, na Morocco ga-abụ mba Arab ọzọ na-esote mmekọrịta na Tel Aviv, mgbe UAE gasịrị. Agbanyeghị na Morocco enweghị mmekọrịta mmekọrịta mba na mba na Israel, enwere njem na mmekọrịta azụmahịa n'etiti mba abụọ ahụ. Na mgbakwunye, ndị Juu Moroccan bụ ndị Juu nke abụọ kachasị na Israel, na-esote ndị Juu Russia, karịrị otu nde mmadụ.
Na Wednesde, ọgọ nwoke Trump na onye ndụmọdụ White House, Jared Kushner, gwara ndị ntaakụkọ na Saudi Arabia na Bahrain ekwetala imepe elu-igwe ha ga-efega Israel.
Na Fraịdee, Eze Hamad bin Isa Al Khalifa nke Bahrain kwupụtara na ya kwenyere isonye na mbinye aka ụbọchị Tuesday nke udo udo nke UAE-Israel. UAE na Bahrain ga-abụ mba Arab nke atọ na nke anọ, n'otu n'otu, iji mezie mmekọrịta na Israel.
N'oge gara aga, ọ bụ naanị Egypt na Jọdan nwere mmekọrịta mmekọrịta na Tel Aviv, mana ọbụlagodi na Qatar Israel ụlọ ọrụ azụmaahịa na-arụ ọrụ na nzuzo adịla kemgbe ọtụtụ afọ.